Internship program for Business students
STI Myanmar University မှ စီးပွားရေး ဘွဲ့ ကျောင်းသားများအတွက် အလုပ်သင်အခွင့်အရေးးများ ပေးအပ်ခြင်း Myanmar University သည် အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ကြီးများဖြစ်သော University of Bedfordshire ( UK ) ၊ The Open University of HongKong ( HK ) တို့နှင့် ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော BBA in Management ၊ BA(Hons) Business Administration နှင့် BA ( Hons ) Accounting စသည့် စီးပွားရေးဘွဲ့ သင်တန်းများ တွင် ပညာဆည်းပူး နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို Multi National ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်သင် ၀န်ထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်လေ့လာစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အတွေ့အကြုံများရရှိစေရန် စီမံဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ BBA in Management ၊ BA(Hons) Business Administration နှင့် စာရင်း BA ( Hons ) Accounting စသည့် မေဂျာအသီးသီးမှ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ( ၃၅) ဦးသည် အလုပ်သင် ၀န်ထမ်းအဖြစ် ဇူလိုင်လ ပထမအပတ်မှ စတင်၍ အောက်ပါကုမ္ပဏီကြီးများတွင် တစ်လ နှင့် နှစ်လကြာလုပ်ငန်းခွင် များ ၀င်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ STI Myanmar University ( MICT Head Office )
၂။ AYA Bank ( ဆူးလေရုံး Head office)
၃။ MOB Bank Limited
၄။ Capital Star Co.,Ltd.
၅။ Loi Hein Co.,Ltd.
၆။ Yangon Stock Exchange Joint- Venture Co, Ltd.
၇။ Blue Ocean Operating Management Company .
ထိုကုမ္ပဏီကြီးများတွင် Public Relationship Department ၊ HR Department ၊ Distribution Department ၊ Leadership and Development Department၊ Operation Department ၊ Finance Department ၊ Marketing Department ၊ Loan Department များတွင်လေ့လာသင်ယူ အလုပ်လုပ်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ငန်းခွင်များထဲတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ သည် ကျောင်းတက်နေစဉ် သင်ယူခဲ့သော စာတွေ့သင်ခန်းစာများကို မိမိတို့၏ ပြင်ပလုပ်ငန်းခွင်တွင် လက်တွေ့လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိခြင်း ၊ မိမိ၏ အနာဂတ် လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ဗဟုသုတများရရှိခြင်းနှင့် စွမ်းရည်သတ္တိများ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း ၊ မိမိတစ်ဦး တည်းသာမဟုတ်၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခြင်း ၊ မိမိ၏ စိတ်ဝင်စားမူနှင့် လုပ်နိုင်စွမ်းအားကို မိမိကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်နိုင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အဆက်အသွယ် ကောင်းများ ရရှိခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိမည်ဖြစ် ပါသည်။